IBM oo la wareegtay Red Hat qiima gaareysa $33.4 Billion. – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Tech News	 October 28, 2018 October 28, 2018 1 Minute
Hishiis weyn oo ka dhacay caalamka Teknoolojiyadda, shirkadda IBM waxey shaacisay mar dhow iney la wareegtay shirkadda kale Red Hat oo loogu bartay iney bixiso adeegyada furan oona lacagta aheyn(Open Source) taasoo ku tiirsan adeegyada daruuraha(Cloud Service) lacag gaareysa illaa $33.4B.
Waxaa lagu tiriyaa Red Had mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn oo bixiya adeegyada furan iyo adeegyada daruuraha, waxeyna siisaa ganacsatada iyo shirkadaha kale oo waaweyn. Waxuu ku tiirsan yahay adeegyada ay bixiso servers ka Linux.
Waxey ka shaqeeneysaa shirkadda IBM iney soo gasho suuqyada adeegyada daruuraha ayadoo la tartameyso AMAZON, GOOGLE iyo MICROSOFT oo dhawaan la shirkowday ADOBE iyo SAP si ay u hormariso adeegyada daruuraha(Cloud Service). Waxey noqoneysaa hishiiskaan midkii ugu weynaa ebid oo lala galo mid ka mid ah shirkadaha bixiya adeegyada furan(Open Source).
Previous Post Halista application no badan oo dhib ku ah isticmaalaha Android ka.
Next Post Shirkadda Google oo ku hagi doonto dhanka arimaha sirtaada oo online ka la xariira.